Miverina amin'ity volana martsa ity ny fetin'ny mozika Moonsplash malalain'i Anguilla
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Miverina amin'ity volana martsa ity ny fetin'ny mozika Moonsplash tian'i Anguilla
Miverina amin'ity volana martsa ity ny fetin'ny mozika Moonsplash tian'i Anguilla
Ny fetiben'ny mozika Moonsplash malaza an'i Anguilla dia hitranga eo ambanin'ny volana feno ao amin'ny Dune Preserve malaza ao amin'ny Rendezvous Bay, ny 21 - 24 martsa 2019.
Rava ny mpitia mozika sy ny mpankafy Anguilla tamin'ny taon-dasa, izay vao sambany teo amin'ny tantarany 27 taona, nampiato ny hetsika ny mpamokatra Moonsplash sady mpamorona Bankie Banx, satria mbola nisy ny fanamboarana ilay toerana. Ny sasany amin'ireo anarana lehibe indrindra amin'ny mozika reggae dia nanaja ny sehatra Moonsplash - Steel Pulse, Jah Cure, Gregory Isaacs, Sugar Minott, Marcia Griffiths, Bunny Wailer, Inner Circle - mba hanomezana anarana vitsivitsy fotsiny. Toy izany koa ny mpanakanto mozika malaza toa an'i Jimmy Buffet sy John Mayer, ary ny rap nahery fo toa an'i Nas sy Q-Tip. Izy io dia traikefa majika, amin'ny nosy miavaka.
Ny Moonsplash tamin'ity taona ity dia niverina tamin'ny fakany ho antoko mangatsiaka indrindra amin'ny beach beach any Karaiba. Fotoana nifanindry tamin'ny volana fenomanana voalohany tamin'ny volana, ny hariva mahagaga dia nipoitra tao amin'ny Dune Preserve, fialantsasatra malaza Bankie, izay miverina ho toy ny bar eo amoron-dranomasina isan'andro ary lanonana fandihizana mikotroka isan-kariva. Ilay bara amoron-dranomasina vao nohavaozina izao dia mahazaka olona 500 amin'ny birao ary 500 hafa eo ambanin'ny fanitarana amoron-dranomasina vonjimaika.
Ny fisongadinan'ny Fetibe amin'ity taona ity dia roa, tsy tokony hadinoina ny fankalazana - Sheriff Bob's 80th Fitsingerenan'ny andro nahaterahana Bash ary Tontolo fahatelo sy sakaiza 40th tsingerintaona fankalazana. Robert Saidenberg, The Sheriff of Goodtimes (aka Sheriff Bob) nihaona tamin'i Bankie Banx tamin'ny faran'ny taona 80 tany amin'ny studio fandraisam-peo iray tany New York City. Nanasa an'i Sheriff hidina tany Anguilla i Bankie ary tamin'ny fahavaratra dia nanomboka nanomana ny Moonsplash voalohany izy ireo. Ity dia taona iray tena miavaka ho an'ny The Sheriff of Goodtimes satria hankalaza ny faha-80 taonany tao Moonsplash 2019. Izy koa no lohahevitra tamin'ny horonantsary fanadihadiana fohy nandresy tamin'ny taona 2018, Ny Sheriff of Goodtime, izay nahazo ny fanadihadiana fohy fohy indrindra tamin'ny Fetiben'ny Sarimihetsika Apple Big.
Tontolo fahatelo, ny 'Reggae Ambassadors', dia iray amin'ireo tarika Reggae lava indrindra tamin'ny fotoana rehetra, ary ny tarika reggae fusion lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, mifangaro amin'ny singa R & B, funk, pop, rock, dancehall ary rap. Miaraka amin'ny fanendrena Grammy 10 sy ny katalaogin'ireo haingo voatanisa mandritra ny efa-polo taona, ny World Third dia hamoaka rakikira studio vaovao amin'ny Lohataona 2019, novokarin'ny mpandresy Grammy in-4, Damian "Jr Gong" Marley, zanaka faralahin'i Bob Marley angano, eo ambanin'ny dian'ny Ghetto Youth International. Navoaka tamin'ny faran'ny taona 2018 ny mpitovo mitondra ny lohateny hoe "Loving You Is Easy".
Manomboka amin'ny 6:30 hariva ny Moonsplash amin'ny zoma 22 martsand amin'ny Funky Horn SXM ao amin'ny Beach Stage, miaraka amin'ireo hetsika fanohanana hafa. Ny lohan-doha amin'ny sehatra lehibe amin'izany hariva izany dia an'i Anguilla Banky Omari ary ilay angano Diamondra mahery miaraka amina hetsika fanampiny hanohanana hambara. Ny asan'ny mozika iraisam-pirenena an'i Omari dia nitondra azy nitety an'i Amerika Avaratra, Eoropa ary Azia, ary ny «Me and You» novokariny vao haingana dia novokarin'i Jason "J Vibes" Farmer multi-Grammy, maro ny Grammy. Tabby, Bunny ary mpitsara dia namokatra rakipeo efa-polo mahery tamin'ny asany lava sy lava.
Ny sabotsy 23 martsard, manomboka amin'ny 6:30 hariva eo amin'ny Beach Stage, ireo mpankafy festival dia horaisina amin'ny tsingerintaona faha-80 taonan'ny Sheriff Orange Grove, ny tarika Sint Maarten malaza izay ny feony mifindra dia mamaky ny soritry ny vatolampy, hip-hop ary reggae, ary Sheriff sy ny lefitra, ahitana an'i Kat Minogue sy ny kapiteny Bob.
Sheriff sy The Deputy dia mitendry mozika nentim-paharazana Folk, Rock, and Country - nankafy fampisehoana 9 volana tao amin'ny Opry City Stage, ny sampana ao amin'ny NYC an'ny Grand Ole Opry malaza eran-tany.
The Tontolo Fahatelo ary ny fankalazana ny faha-40 taonan'ny sakaiza dia mandray ny dingana lehibe amin'ny harivan'iny hariva iny, miaraka amin'ny sary an'ohatra an'ny Festival, ilay tsy manam-paharoa Bankie Banx, ary ny zavatra marobe Tena fikasana, tarika reggae iray izay niandoha tao Anguilla misy fakany ao Dominica, izay nanetsiketsika ny sehatry ny mozika teo an-toerana sy isam-paritra. Vahiny tsy ampoizina no hamita ny laharana mahafinaritra amin'ny asabotsy.
Ny alahady 24 martsath, ny antoko Moonsplash Beach dia manomboka amin'ny 11 ora sy sasany maraina miaraka amin'ny fisehoan-javatra tampoka nataon'ny mpilalao Bankie Banx Moonsplash. Hetsika mahafinaritra maro no kasaina hatao anio.
Vibe mahafinaritra, morontsiraka mahafinaritra, fampisehoana mahafinaritra, mozika mahatalanjona - inona koa no tadiavinao? A Beyond Mahagaga miandry anao ny traikefa rehefa manatevin-daharana anay ao amin'ny Moonsplash any Anguilla ianao amin'ny volana ho avy.
Ny seranam-piaramanidina Budapest dia mahita ny fanitarana portogey miaraka amin'i Ryanair
United Airlines manome ny mpanakanto kanto lehibe kokoa noho ny lamba canola